Graphic Card တစ်ခုဝယ်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ဂျင်းထည့်မိတာမျိုး မဖြစ်အောင် ... • TECH CORNER
ခေါင်းစဉ်ထဲကအတိုင်းပဲ Graphic Card တစ်ခုဝယ်ယူတော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ဂျင်းထည့်မိတာမျိုး မဖြစ်အောင် GPU တစ်ခုရဲ့ သိထားသင့်တဲ့ Specifications တွေ ဖတ်ပုံ၊ ဖတ်နည်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။Desktop GPU တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး PC Knowledge Episode 6: Part 1 နဲ့ Part2တွေကို ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ Graphic Card တွေရဲ့ Specs ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာ အရေးအကြီးဆုံး အချက် (၁၂) ချက်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့
Graphic Processing Unit (Nvidia or AMD?)
Compute Performance တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Graphic Card တစ်ခုရဲ့ အသည်းနှလုံးလို့ပြောရမယ့် Graphic Chip တွေကို ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Graphic Chip တွေကို Nvidia နဲ့ AMD တို့ကထုတ်လုပ်ပြီးတော့ Intel ကလဲထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ Nvidia ဘက်မှာဆိုရင် GTX နဲ့ RTX Graphic Chip တွေရှိပြီးတော့ AMD ဘက်မှာတော့ Vega နဲ့ RX Graphic Chip ဆိုပြီး အသီးသီးရှိကြတဲ့ Graphic Chip တွေကိုဆိုလိုတာပါ။
GPU တွေမှာလဲ CPU တွေလိုပဲ Core တွေပါဝင်ကြပါတယ်။ မတူတဲ့အချက်ကတော့ GPU ရဲ့ Core အရေအတွက်က CPU တွေမှာလို ၄လုံးကနေ ၈လုံးလောက်ပဲရှိတာမဟုတ်ပဲနဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ Core တွေပါဝင်တာပါ။ ဒီ Graphic Core တွေကို Nvidia ဘက်က CUDA Core လို့ခေါ်ပြီးတော့ AMD ကတော့ Steam Processor တွေလို့အသီးသီးခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ CPU Core တွေလိုတော့ Core အရေအတွက်များရင် များသလို Performance ပိုကောင်းမယ်လို့တော့ တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်လို့တော့ မရပါဘူး။ ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် Performance တန်းတူကဒ်နှစ်ကဒ်ဖြစ်တဲ့ AMD ရဲ့ RX 5500XT နဲ့ Nvidia ရဲ့ GTX 1650Super တို့ကိုယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် RX 5500XT မှာ Steam Processor ပေါင်း 1408 unit ပါဝင်ပြီးတော့ GTX 1650Super မှာ CUDA Core ပေါင်း 1280 unit ပါဝင်ကြပါတယ်။
3.Core Clock Speed
Core clock speed ဆိုတာကတော့ အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ Cuda Core တွေ Stream Processor တွေရဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့နှုန်း တစ်နည်းအားဖြင့် Clock Speed ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Core Clock Speed တွေက ကိန်းသေတစ်ခုအနေနဲ့မဟုတ်ပဲ Base Clock Speed တွေ Boost Clock Speed တွေအပြင် Card တစ်ခုချင်းစီရဲ့ Thermal & Power Performance တွေပေါ်မူတည်ပြီး Overclock လုပ်လို့ရတဲ့ Clock Speed တွေစသဖြင့် မျိုးစုံကိုရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ RX 5500XT မှာဆိုရင်
Base Clock Speed: 1607 MHz
Game Clock Speed: 1717 MHz
Boost Clock Speed: 1845 MHz ဆိုပြီး အသီးသီး ရရှိပါတယ်။
4.Graphic Memory Type
ကျနော်တို့ရဲ့ ပုံမှန် RAM လိုမျိုး Graphic Card တွေမှာလဲ ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် Graphic RAM တစ်မျိုးပါဝင်ကြပါတယ်။ ဒီ VRAM တွေဟာ GPU ကတွက်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ Graphic Data တွေကို ခေတ္တသိမ်းဆည်းပေးတဲ့တာဝန်ကို အဓိကထမ်းဆောင်ပါတယ်။ အဓိကအသုံးပြုတာတွေကတော့ GDDR 5, GDDR 5x နဲ့ GDDR6တို့ဖြစ်ကြပြီးတော့ ထူးခြားချက်အနေနဲ့ AMD ရဲ့ Vega 56 နဲ့ Vega 64 တို့မှာတော့ HBM2(High Bandwidth Memory 2) ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ GDDR တွေမြင့်ရင်မြင့်လာသလို Graphic Performance တက်လာလေ့ရှိပြီး ပါဝါစားလဲ ပိုသက်သာလာလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ အစောပိုင်းက GDDR5နဲ့ထွက်ခဲ့တဲ့ GTX 1650 နဲ့ နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ GTX 1650(GDDR 6) တို့ကြားမှာ GDDR6Version က Performance 6% လောက်ပိုသာပါတယ်။
5.Graphic Memory Size
ဒါကတော့ အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ VRAM တွေရဲ့ Capacity ဖြစ်ပြီးတော့ ပုံမှန် RAM တွေလိုပဲ GB နဲ့တိုင်းတာကြပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ VRAM များရင် Graphic Card ရဲ့ Performance လဲပိုကောင်းလေ့ရှိပေမဲ့ VRAM ပိုများတိုင်းပိုကောင်းတယ်လို့တော့ တရားသေသတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ VRAM များရင်တော့ Graphic Data များများလိုအပ်တဲ့ ဂိမ်းအမြင့်တွေနဲ့ Resolution မြင့်တဲ့ဂိမ်းတွေကစားလို့ ပိုအဆင်ပြေလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် VRAM 8GB ရှိတဲ့ RX 580 လိုကဒ်ဟာ VRAM 4GB ပဲပါဝင်တဲ့ GTX 1650Super နဲ့တန်းတူ Performance သာထွက်ပြီးတော့ Graphic Memory အရမ်းလိုအပ်တဲ့ ဂိမ်းတချို့မှာသာ အနည်းငယ်သိသာတဲ့ကွာခြားချက်ကို မြင်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
Memory Bandwidth ဆိုတာကတော့ Graphic Card တစ်ခုရဲ့ Memory Performance တစ်ခုလုံးကို အကြမ်းအားဖြင့်ဖော်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Memory Bandwidth ဟာ VRAM ထဲမှာရှိတဲ့ Data တွေကို ဘယ်လောက်မြန်မြန် အသုံးချနိုင်လဲဆိုတာကို ဖော်ပြပါတယ်။ Memory Clock Speed တွေ Memory Bus Width တွေနဲ့ Memory Type အသီးသီးရဲ့ Clock Circle တစ်ခုစီမှာ Data တွေဘယ်လောက်များများ Transfer လုပ်နိုင်လဲပေါ်မူတည်ပြီး Performance ကလဲကွာခြားသွားပါတယ်။
Motherboard Interface ဆိုတာကတော့ Motherboard ပေါ်မှာ Graphic Card တပ်တဲ့အပေါက်ကိုဆိုလိုတာပါ။ အရင်ကတော့ Graphic Card တပ်ဆင်ဖို့အတွက် AGP (Accelerated Graphic Port) ဆိုတာပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့ 2004 နောက်ပိုင်းမှာတော့ အဲ့ဒီနည်းပညာကိုအသုံးမပြုတော့ပါဘူး။ လက်ရှိမှာတော့ Graphic Card တပ်ဆင်ဖို့အတွက် PCI Express (PCIe) Slot တွေကိုပဲအသုံးပြုကြပါတယ်။
8.Thermal Design Power (TDP)
Thermal Design Power (TDP) ဆိုတာကတော့ Graphic Card တစ်ခုရဲ့ Power Consumption နဲ့ Thermal Performance ကိုဖော်ပြပါတယ်။ TDP များရင်များသလို ပါဝါပိုစားမယ်၊ ပိုပူမယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Laptop GPU တွေမှာဆိုရင် Model တူရင်တောင် TDP ပိုများတဲ့ကဒ်တွေက Performance ပိုကောင်းလေ့ရှိတတ်ပါသေးတယ်။ DIY PC ဆင်မယ့်သူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ဝယ်ယူမယ့် Graphic Card ရဲ့ TDP ကအရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ GPU ရဲ့ TDP များရင်များသလို PSU ကောင်းကောင်းတွေ Ventilation ကောင်းတဲ့ Case တွေကိုရွေးချယ်ကြရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကြုံတုန်းပြောရရင် 185W TDP ရှိတဲ့ RX 580 လိုကဒ်မျိုးကို လေးသောင်းတန် PSU လောက်နဲ့တွဲဆင်ထားတာကလဲ အန္တရာယ်များလှပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ စက်ပြုတ်ကျတာမျိုးထိမဖြစ်တောင် ရေရှည်မှာတော့ PSU ရော Graphic Card အတွက်ပါမကောင်းပါဘူး။
Power Connector ဆိုတာကတော့ Graphic Card ကိုပါဝါပေးတဲ့ အပေါက်တွေကိုဆိုလိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Graphic Card တပ်ဆင်ထားတဲ့ PCIe Slot ဟာ 75W ထိပါဝါပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Graphic Card တွေရဲ့ Performance တိုးတက်လာသလို တစ်ဖက်မှာလဲ Power Consumption လဲတက်လာတဲ့အခါမှာ PCIe Slot ကရတဲ့ 75Watt ဟာမလုံလောက်တော့ပါဘူး။ အဲ့အခါမှာတော့ Graphic Card တွေကို PSU တွေကနေ တိုက်ရိုက်ပါဝါကျွေးရပါတော့တယ်။ ဒီ Connector တွေဟာ6Pin သို့မဟုတ် 8 Pin တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ လက်ရှိ Performance အမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့ကဒ်တွေဟာ Connector3ပေါက်ထိပါဝင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် PSU ဝယ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝယ်ယူမယ့် Graphic Card ကိုပါဝါပေးဖို့ 8 Pin Connector လုံလောက်ရဲ့လားဆိုတာ တစ်ချက်လောက်တော့ စစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
10.Display Output Port
Graphic Card တွေမှာ Monitor တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် Output Port တွေပါဝင်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ PC က Multi Monitor သုံးဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝယ်ယူမယ့် Graphic Card ရဲ့ Display Output Port တွေကို ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ Multi Monitor Setup ဆင်ဖို့အတွက် Multi Graphic Card တွေမလိုအပ်ပေမဲ့ ကိုယ်ဝယ်ယူမယ့် Graphic Card ရဲ့ Output Port တွေနဲ့ Monitor တွေရဲ့အပေါက်တွေ တူညီဖို့သာလိုအပ်ပါတယ်။ Output Port တွေအနေနဲ့ HDMI, Display Port, DVI, VGA ဆိုပြီးရှိကြပါတယ်။ DVI နဲ့ VGA ကတော့ မော်ဒယ်နိမ့် Monitor တွေနဲ့မော်ဒယ်နိမ့် Graphic Card တွေမှာသာပါလေ့ရှိပြီးတော့ နောက်ထွက် Graphic Card တွေမှာ မပါဝင်တော့ပါဘူး။ ခေတ်သစ် Graphic Card တွေမှာတော့ HDMI နဲ့ Display Port တို့အပြင် USB-C Port တွေပါ ပါဝင်တတ်ပြီး USB-C Monitor တွေနဲ့ပါ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Graphic Card တွေဟာ Graphical Data တွေကိုတွက်ချက်ဖို့ ထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုတွက်ချက်ဖို့အတွက် Hardware နဲ့ Software တို့ရဲ့ကြားမှာ Graphics API ကပေါင်းကူးပေးပါတယ်။ Graphic API က Graphic Card ကိုရှုပ်ထွေးတဲ့ Graphical Data တွေကိုဘယ်လိုတွက်ချက်ရမလဲဆိုတာကို တွက်ချက်နည်းတွေနဲ့ ကူညီဖြေရှင်းပေးပါတယ်။ Graphics API တွေအနေနဲ့
နောက်ဆုံး Version တွေအနေနဲ့ DirectX12, OpenGL 4.6 နဲ့ Vulkan 1.2 ဆိုပြီးအသီးသီးရှိကြပြီးတော့ OpenGL ကိုတော့ Vulkan နဲ့အစားထိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်မကြာခင်မှာပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်။
CPU ဒါမှမဟုတ် GPU လိုမျိုး Processing Unit တစ်မျိုးရဲ့ Performance ကို Gigaflop သို့မဟုတ် Teraflop နဲ့တိုင်းတာကြပါတယ်။ FLOPS ဆိုတာကတော့ Floating-Point Operation Per Second ဖြစ်ပြီးတော့ တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ Floating-Point Operation ဘယ်နှခုပြီးအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်လဲဆိုတာကို တိုင်းတာပါတယ်။ Graphic Card တွေရဲ့ Performance ကို Gigaflop တွေ Teraflop တွေနဲ့တိုင်းတာတာက တိုင်းတာနည်းတွေထဲက အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လဲ ဒီကိန်းဂဏာန်းတစ်ခုတည်းကတော့ Graphic Card တွေရဲ့ Performance ကိုအပြည့်အဝဖော်ပြနိုင်စွမ်းတော့ မရှိတာကိုတော့ သတိပြုသင့်ပါတယ်။
ကြော်ငြာ – ကျွန်တော်တို့ Tech Corner ရဲ့ Tech Store တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Corner မှာ Gaming Laptops, Mobile Phones, PC Gadgets နဲ့ Gaming Consoles တွေကို ယုံကြည်စွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Gaming Laptops Update Price List ကြည့်ရန်
အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တာတွေကတော့ Graphic Card တွေရဲ့ Specs တွေကိုနားလည်အောင် ဖတ်တဲ့နည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Graphic Card တွေကို လက်တွေ့ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာတော့ ထုတ်လုပ်တဲ့ Brand တွေ၊ Model တူ Graphic Card တွေရဲ့ ကြားက ကွာခြားချက်တွေ၊ Premium ဖြစ်မှုတွေ၊ Cooling Solution တွေ အစရှိတဲ့အချက်တွေကိုလဲ ထပ်မံထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဒါတွေကိုတော့ နောက် Article တွေမှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
All photos are sincerely credited to original sources
Post Views: 1,276 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 Mobile Nvidia Graphic Chips ကျွန်တော်တို့ Episode 6: Part 1 မှာတုန်းက Graphic
Post Views: 1,355 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 ကျနော်တို့ Page ကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရပ်နားသွားတဲ့ Computer Parts တွေအကြောင်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ ဒီတစ်ခေါက်ဖော်ပြပေးမှာကတော့ PC Parts
What is HTC Doing Now? (17,848)